Tombontsoa ho an'ny cameras nitaingina mpitandro ny filaminana | Vahaolana OMG
Amin'ny andro tsirairay mandalo dia mihamitombo ny mponina eto amin'izao tontolo izao. Izy io koa dia manome fiakarana haingana amin'ny teknolojia sy siansa. Androany dia afaka mahita zavaboary mahafinaritra be dia be isika eo akaikintsika. Manamora ny fiainana ireo zavatra noforonina ireo. Miampy ny fitomboan'ny mponina ao amin'ny tanàn-dehibe iray dia azo antoka fa mitombo be ny tahan'ny heloka bevava. Tsy maintsy miatrika olana isan'andro ny Polisy ao amin'ny tanàna. Manampy anay ny siansa, satria nanampy anay hanome fakantsary Worn Body.
Fa maninona no ampiasain'ny fakan-tsary maloto vatana?
Body Worn Cameras dia famoronana goavana amin'ny siansa sy ny teknolojia ary mahatonga azy ireo mora kokoa ho antsika. Andao hojerentsika ny fampiasana an'io fakantsary io. Fa maninona no ampiasaina amin'ny fakantsary kankana? Eny, manokana ireto fakantsary ireto fa ampiasain'ny polisy manokana mandritra ny fotoanany. Mampiasa ireto fakantsary ireto ny polisy mba handraisana ny asa isan'andro. Maninona no ataon'izy ireo izany. Ny ain'ny polisy iray dia feno risika sy fanamby. Tsy maintsy ataon'izy ireo tsara ny dingana tsirairay. Izany dia mitaky fihetsehana mavitrika sy maranitra. Ahoana raha milaza isika fa ny fakan-tsary niasa vatana dia mampitombo ny fahatsapany azy? Marina izany. Raha ny fakantsary dia mirakitra ny andavanandro fanaon'ny polisy dia mijaly ho azy fahatelo. Indraindray misy zavatra tsy tsikaritry ny olona iray eo am-pijerena. Ireo zavatra ireo dia azo amin'ny fakantsary. Ary ho fanampin'izany, azo raisina an-tsoratra imbetsaka ireo firaketana an-tsoratra ireo izay tadiaviny hanaovana fikarohana sy hanaovana fanadihadiana.
Ny tombotsoan'ny fakan-tsary nofom-batana:
Body Worn cameras dia manome fanampiana lehibe amin'ny fiainana andavanandron'ny polisy. Raha hitantsika mazava, avy eo isika dia afaka mahita marimaritra iraisana amin'ity vokatra ity fa amin'ny ankapobeny, tena manampy be dia be ny fakan-tsary kankana. Ny gadget rehetra dia manana pros sasany ary koa cons kanefa heverinay fa manana tombony betsaka kokoa io gadget io raha oharina amin'ireo isan'ny tsy fahampiana.
Andao hojerentsika haingana ny tombony azo avy amin'ny fakan-tsary Body Worn:
Mitombo ny fiarovana:
Mampitombo ny filaminan'ny besinimaro ny polisy sy ny polisy amin'ny alàlan'ny fanomezana fakantsary maranitra azy ireo amin'ny fakantsary. Hetsika ny fihetsiky ny olona rehefa fantany fa sary. Ny fakan-tsary amin'ny vatan'ny polisy dia afaka mandrisika ny fitondran-tena tsara ataon'ny polisy sy ny mpikambana ao amin'ny vahoaka, mitarika ny fihenan'ny herisetra, ny fampiasana trangan-kery, ary ny fanafihana ireo tompon'andraikitra mitaky andraikitra. Araka ny fanadihadiana iray, dia hita fa tafahoatra ny fampihenana ny 40% ny fitambaran'ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny fakantsary vatana; ny fitarainana nataon'ireo manamboninahitra dia nidina avy tany 30 tamin'ny taona talohan'ny fianaran'ny 3 nandritra ny taom-pitsarana. Ny fananana fakan-tsary eo amin'ny vatana ihany koa dia taratry ny nataon'ireo polisy ihany koa. Noho izany dia zava-dehibe amin'ny fihetsiky ny polisy sy manatanteraka ny andraikiny amin'ny fomba mety. Araka ny fahafantaran'izy ireo fa ny fakantsary dia mirakitra azy ireo ary raha miresaka ratsy aza izy ireo dia ho tompon'andraikitra amin'izany.
Toy izany koa ho an'ny besinimaro izany. Hanao fihetsika sy hanaja ny polisy ihany koa izy ireo raha mahafantatra fa efa voarakitra sy ao anaty fakantsary iray.
Fanesorana ny fiampangana diso:
Manatsara ny fandraisana andraikitry ny polisy ny cameras an'ny polisy ary miaro ireo manampahefana amin'ny fiampangana lainga. Ny fakantsary fiasan'ny polisy dia manome porofo an-tsary sy audio izay afaka manamarina samirery ny zava-nitranga na inona na inona toe-javatra nisy. Andao maka ohatra toy ny any Texas, polisy iray no voatifitra sy voampanga tamin'ny famonoana azy taorian'ny fipoahan'ny fakantsary fiakanjo fakan-tsary izay nifanohitra tamin'ny fanambarana voalohany tamin'ny famonoana tanora iray tsy nampiakarina. Mampiseho izany ny maha-zava-dehibe ny fakan-tsary vita amin'ny vatana. Azontsika atao ny mahita ohatra sy tranga maro eo amin'ny fiainana andavanandro ataon'ny polisy izay mitaky ireo fahatsapana maranitra ireo. Noho izany, ny zavatra tsara indrindra azon'izy ireo dia ny fakan-tsary vita amin'ny vatana. Fihetsika iray mitovy dia niseho tany Texas tao 2015 izay nisy polisy nampangaina ho meloka, voaheloka ho faty izay nijanona taorian'ny fakana sary avy amin'ny fakantsary fiakanjo vy.
Ny cameras an'ny polisy dia fitaovana tsara hianarana ary manana fanohanana matanjaka avy amin'ny mpikambana ao amin'ny vahoaka. Lahatsary voarakitra amin'ny fakantsary mpitandro ny filaminana dia azo ampiasaina hampiofanana mpiandraikitra vaovao sy efa misy eo amin'ny fomba hanatontosana mandritra ny fihaonambe sarotra amin'ny vahoaka. Ny Departemantan'ny polisy any Miami dia nanamboatra fakantsary vatana ho fanazaran-tena hatramin'ny 2012. Manome fotoana ahafahana mianatra tonga lafatra ho an'ireo tranainy vaovao izany. Azon'izy ireo jerena ny zokiolona mianjady amin'ny toe-javatra misy azy ireo. Izany dia manome azy ireo hianatra sy hivoatra. Raha hitan'ireo tompon'andraikitra vaovao ireo firaketana ny fihaonana, dia afaka miomana ara-tsaina izy ireo. Manome tombony ihany koa izy ireo mandritra ny «drill» ohatra: ny zokiolona dia afaka manatanteraka ny drill na ny fampianarana miaraka amin'ireo fakan-tsary mifatotra amin'ny vatany. Afaka mianatra avy amin'izy ireo ireo rooky amin'ny alàlan'ny fijerena ireo horonantsary voarakitra izay hanomezana vintana lehibe hianarany azy ireo.
Amin'ny ambaratonga famaranana dia afaka milaza isika fa fakantsary vita amin'ny vatana dia gadget lehibe izay azo ampiasaina ho an'ny tanjona mahasoa maro. Misy ihany koa ny tsy fatiantoka amin'ny fampiasana ity gadget ity fa raha hitantsika mazava kosa dia ho fantatsika fa manana tombony betsaka kokoa avy eo ny isan'ny tsy fahampiana. Noho izany, raha ny hevitray manokana, ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia ohatra ho an'ny fitaovana ilaina.
Tombontsoa ho an'ny fakantsary raikitra an'ny polisy no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin